आणविक हतियारको निर्मूलन : अहिलेको आवश्यकता
आश्वीन १०, २०७५
आणविक सम्पन्न देशहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । देशहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको भए पनि विश्वका करिब सम्पूर्ण आणविक सम्पन्न देशहरु निरस्त्रीकरणको पक्षमा बोल्ने गरेको पाइन्छ । आणविक अस्त्रले विश्वको कुनै पनि देशको कल्याण गर्ने नभएकोले पनि होला, अधिकांश शक्ति सम्पन्न देशहरु आणविक हतियारलाई हटाउनु पर्छ भनेर भनिरहेका छन् ।
आणविक हतियारले धेरै देश सुसज्जित भइसकेका छन् । आणविक हतियारले सम्पन्न देशलाई विकसित वा शक्तिशाली देश मानिन्छ । यसै कारणले होला, आणविक हतियारप्रतिको आकर्षण बढेको छ । आणविक हतियारको आकर्षण भन्नु चाहिँ वास्तवमा हतियार मोह बढ्नु हो ।जति देश आणविक हतियार सम्पन्न छन्, तीभन्दा कैयौँ गुणा बढी देश चाहिँ गरिबीको समस्यामा रहेका छन् । धेरै देशमा गरिबी, अभाव र भोकमरीको समस्या रहेको छ । गरिबी, अभाव र भोकमरीको समस्या रहेका देशहरुमा आणविक शस्त्रको कुरा कसैले सोच्न पनि सक्दैनन् । भोकमरी, अभाव र समस्याले ग्रस्त देशका नागरिकहरुले आफ्नो देशलाई यस प्रकारको समस्याबाट मुक्त गराउन के कति उपायहरु गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बढी चिन्चित हुन्छन् । आणविक अस्त्रले सम्पन्न नभएका देशहरुमध्ये त कतिपय यस्ता छन् जहाँ अशान्ति छ । अशान्ति भन्नु चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व छ । आन्तरिक अशान्तिले कतिपय देशलाई उँभो लाग्न दिएको छैन । एकदम सही कुरो हो, जहाँ अशान्ति हुन्छ, त्यहाँ विकासको गति ज्यादै कमजोर हुन्छ । विकासको गति सुस्त हुन्छ । सुस्त गतिले विकास हुँदा सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि हुन्छ । असन्तुष्टिलाई केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा नेताहरुले आफ्नो हतियार बनाएको हुन्छ । राजनीतिकर्मीहरुकै कारण देशमा अस्थिरता झन् बढेको हुन्छ । अस्थिरताको रंग कहीँ जात, कहीँ धर्म, कहीँ समुदाय, कहीँ सम्प्रदाय आदि हुने गर्छ । राजनीतिले सही बाटो समात्न सकेको हुँदैन । देशको दीर्घकालीन हितको ख्याल गर्नेहरु हुँदै नहुने होइन तर स्वार्थको बाटोमा हिँड्नेहरुको लाममा यस प्रकारका मानिसहरु हराउँछन् । कतिपयले कुरो बुझेर पनि सबैलाई बुझाउने क्षमता राखेको हुँदैन ।आणविक हतियारको उपयोगले के हुने हो ? यसले मानिसको कल्याण गर्छ कि गर्दैन ? जुन देश शक्ति सम्पन्न छ, तिनीहरुले आफ्नो बजेटको वार्षिक केही अंश आणविक हतियारको क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ । यो लगानी उत्पादक क्षेत्रमा भएको मान्न सकिन्न । सम्भवतः आणविक हतियार सम्पन्न देशमा पनि गरिबी हट्न सकेको छैन । आजको विश्वमा कुनै यस्तो देश छैन जहाँ बेरोजगारी नहोओस् । बेरोजगारीले युवालाई बरालिन सहयोग गर्दछ । आणविक सम्पन्न देशहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । देशहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको भए पनि विश्वका करिब सम्पूर्ण आणविक सम्पन्न देशहरु निरस्त्रीकरणको पक्षमा बोल्ने गरेको पाइन्छ । आणविक अस्त्रले विश्वको कुनै पनि देशको कल्याण गर्ने नभएकोले पनि होला, अधिकांश शक्ति सम्पन्न देशहरु आणविक हतियारलाई हटाउनु पर्छ भनेर भनिरहेका छन् । आणविक हतियारलाई हटाउन वर्तमान परिवेशमा त्यत्ति सहज पनि छैन । कोही अगाडि बढिसकेपछि पछाडि फर्किन त्यत्ति सम्भव छैन र अर्कोतिर विश्वको राजनीति पनि केही यस्तै किसिमको छ कि विभिन्न देशलाई विभिन्न देशसित डर रहेको छ । विश्वका सबै देश एक अर्काका मित्र हुन सकेका छैनन् । विभिन्न शक्ति सम्पन्न देशबीच पनि एकापसमा केही कटुता, वैमनस्यता र मनमुटाव रहेका छन् । आर्थिक प्रतिस्पर्धा, राजनैतिक विचारको विभिन्नता, अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने प्रयास, आफ्नो देशको व्यापारलाई विश्वका अन्य देशमा फैलाउन खोज्ने चाहनाजस्ता कारणले पनि आणविक हतियारको महत्व बलिया देशहरुको लागि रहेको छ भन्ने मान्छन् ।हो, राजनीति र अर्थतन्त्र दुई प्रमुख कारणले आणविक अस्त्र अझै केही दशकसम्म रहन सक्छन् । परिस्थिति वर्तमान अवस्थाकै रह्यो भने झन् यस प्रकारका हतियारको वृद्धि हुन पुग्न पनि बेर लाग्दैन । अन्य देशहरुले पनि हतियार बनाउने होडबाजीमा सामेल हुन बेर लाग्दैन तर आणविक अस्त्रलाई विस्तारै नष्ट गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वका करिब सबै शक्ति सम्पन्न देशहरु एकमत रहेकाले आउँदा दिनमा आणविक अस्त्रको निर्माणमा कमी आउने र नष्ट हुँदै जाने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । आजको विश्व आधुनिक र वैज्ञानिक दृष्टिले एउटा परिवार बनिसकेको छ । विश्वलाई एउटा परिवार भन्न थालिएको छ । तर पनि परिवारभित्र मतभिन्नता हुन्छ । मतभिन्नताले गर्दा नै आणविक अस्त्रहरुको निर्मूलनमा केही समस्या आइरहन सक्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यसतर्फ प्रयास गरिरहेको छ । विश्वका शक्ति सम्पन्न देशहरुले पनि आणविक अस्त्रको निर्मूलनमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको अगुवाइमा पहल भइरहेको छ । प्रयास भइरहनुपर्छ पनि । आणविक अस्त्रले विश्वको सुरक्षा गर्ने कुरामा सहमति वा विमति दुवै तर्क हुन सक्छन् । यस प्रकारको बहस त भइरहनु पर्छ । बहसले साँच्चै विश्वलाई अगाडि बढाउँछ । विश्वलाई आणविक अस्त्रमुक्त बनाउने काम निरन्तर चलिरहन्छ । हो, कतिपय अवस्थामा आणविक अस्त्रको डरले पनि कतिपय नकारात्मक तत्व आफैँमा तह लागेको हुन सक्छ । अरुलाई देख्न नचाहने प्रवृत्रि हटिइसकेको छैन । यही नकारात्मक प्रवृत्तिले गर्दा आणविक अस्त्रको विकास भइरहेको हुन सक्छ । जसरी कतिपय गाउँमा धनी मानिसहरुले साँच्चै गरिब मानिसको सुरक्षा गरिरहेका हुन्छन्, शक्ति सम्पन्न देशहरुले पनि विपन्न देशहरुको पक्षमा यसै गरी काम गरेको पनि देखिन्छ । छिमेकी बलियो भएपछि कमजोरलाई पनि बाह्य आक्रमणको डर हुँदैन । यसरी मानसिक रुपमा भए पनि आणविक अस्त्र सम्पन्न देशका छिमेकीहरुलाई आडभरोसा भएको हुन सक्छ ।यद्यपि आणविक अस्त्रको निर्मूलनको पक्षमा आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ ।